Gaagaab oo Madaxweynaha Puntland ku Eedeeyey Maamul Xumo iyo Damac Mudo Kororsi (Dhageyso) | Anti-Tribalism
← Xildhibaano kulan ku yeeshay Nairobi oo digniin soo saaray
Gaagaab oo Madaxweynaha Puntland ku Eedeeyey Maamul Xumo iyo Damac Mudo Kororsi (Dhageyso)
March 13, 2012 0 Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo marna ahaa wasiirkii maaliyada Puntland oo manta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa dhaliil u jeediyey maamuklka hadda ka jira Puntland iyo siyaasadda hogaanka madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole.
Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab ayaa ugu horeyn sheegay shirkiisa jaraa’id kaga hadlay xaalada Puntland oo uu sheegay inay mareyso meeshii ugu liidatay tan iyo 1998-kii markii la dhisay Puntland, wuxuuna soo qaatay dhaqaale burburka, caddaalad darada, sameynta dastuurka, kala googo’a Puntland ku dhacay iyo maamul xumo uu sheegay inay baahday.
Gaagaab wuxuu tilmaamay in madaxweyne Faroole khudbadi uu dhwaan ka jeediyey madaxtooyada Garowe ka jeediyey uu ku sheegtay in xilka loo doortay shan sanadood taasoo ah sida uu yiri been abuur. Wuxuu ka digay in dastuurka cusub ee hadda loo diyaarinayo Puntland lagu soo dhex daray lifaaq sheegaya in Faroole uu xilka heyn doono shan sano.
“Mudada xilka goleyaasha dawlada waa shan sano oo been ah ayaa lagu lifaaqay si 480 ergo ay gacanta u taagto, hadhowna loo yiraahdo dadweynihii baa noo ansixiyey”. Ayuu yiri Gaagaab. Wuxuuna guddiga doorashada u sheegay inay arintaasi ogaadaan inay khiyaano tahay hadeysan ogeyn.
“Wuxuu ku dooday Madaxweynuhu shan sano baa la ii doortay xukuumaddii hore ayaan diyaarisay. Waxyaabaha qaarkood in laga xishoodo ayaa wanaagsan,.. hadey shan sano tahay annagaba waa joogi lahayn.” Ayuu sii raaciyey Gaagaab.
Wuxuyu ku dooday in qodobka 54aad ee dastuurka Puntland uu cadeynayo in “mudada xilka madaxweynaha ay tahay afar sano”. Wuxuu kaloo bayaamiyey in madaxweyne Faroole uu rabo in shan sano u ka dhigto waqtigiisa isagoo raba inuu xigto dastuurka cusub ee KMG ah ee hadda Puntlad loo sameynayo kaasoo bilawgiisu aaa hal sano ka dib markii isaga la doortay.
Afti u qaadista dastuurka iyo
Gaagaab wuxuu aad u dhaliilay in dastuurka cusub ee Puntland ee KMG ah ay u codeeyaan 480 ergay oo kaliya, taasoo uu ku sifeeyey inay tahay khiyaano dadweynaha laga galayo.
Wuxuuna ka digay in nidaamkaasi 480ergay ah uu keeni karo dhibaato dadkana aysan u cuntami doonin.
Dhaqaalaha Puntland iyo miisaaniyada
Gaagaab wuxuu shirkiisa jaraa’id kaga hadlay dhaqaale la’aanta ka taagan Puntland iyo qiime kororka ku dhacay maciishada dadka taasoo dadweynaha caadiga ah gaarsiisay heer ay noloshii heli waayaan.
Wuxuu sheegay in miisaaniyada Puntland ay ahayd 32 bilyan oo Shilin Soomaali ah markii uu xilka hayey Cadde Muuse (xilligaasi oo Gaagaab wasiirka maaliyada ahaa), hase yeeshee hadda ay saddex jibaarantay oo ay gaartay 97 bilyan Shilin.
“Si uu lacag badan uu helo canshuurtii waa uu kordhiyey, Miisaaniyadii uu saameyeyna waxay oqotay saddex jibaar tii waagii aan anagu joognay oo hadda waa 97 bilyan oo Shilin sanad walbana waxbaa lagu daraa.” ayuu sii raaciyey.
Wuxuu kaloo soo hadalqaaday sicir bararka iyo maciishada liidata ee dadweynaha heysata waqtigan oo uu sabab uga dhigay canshuur kordhinta iyo dhaqaale burbur uu masuul ka yahay madaxweynaha Puntland, wuxuuna yiri “dadkii gaajo ayey u dhimanayaan”.
“….Arintaasi waxaa laga dhaxlay oo dadweynuhu ka dhaxlay oo dalku ka dhaxlay inay ganacsatadii dalka ka qaxdo, Afrika, Jabuuti iyo Jigjiga oo hadda furantay in loo qaxo oo laga cararo canshuurta bil walbaba la kordhinayo.” Ayuu yiri Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab.
Wuxuu sheegay in kiiashka sonjkorta oo $26 ka ahaa Puntland uu manta marayo $50.
“Mushaharka maxaa lagu cunayaa.” Ayuu isweydiiyey.
Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo shirkiisa jaraa’id su’aalo lagu weydiiyey ayaa wuxuu madaxweybne Faroole ku eedeeyey in markii uu yimid uu Puntland oo hal maamul ahayd uu ka dhigay saddex maamul oo kala ah Khaatumo State, Casayrland iyo Puntland siyaasad xumo maamulka ka jirta darteed.
“Madaxweynuhu mar haddii uu waxqabad soo qaaday, waxay ahayd iuu sheego oo uu ku faano kala qeybinta Puntland, Puntland Khaatumo, Casayrland intaasuu ka dhigay. Inuu ku faano ayey ahayd oo uu dhaho dawlad kaliyaan ahayne saddex baan ka dhigay.” Ayuu yiri Gaagaab oo sii raaciyey “Masuuliyadana isagaa iska leh”.
Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab wuxuu ku soo hadal qabsaday hadal uu dhowaan jkeediyey madaxweyne Faroole oo ahaa in maamulkiisu uu horumariyey Garowe, taasoo lafteeda uu sheegay in maamulkii hore ay amaanteeda leeyihiin.
“Mashaariicda Puntland ka socotay meeshii aan uga dhaqaqnay ayaey weli taagan tahay”. Ayuu yiri isagoo ku soo hadal qabsaday garoomada Boosaaso iyo Garowe.
Eedeynta maamulkii hore
Mr Gaagaab ayaa madaxweynaha u soo jeediyey inuu joojiyo faanka uu idaacadaha ka sheego iyo ereyada eeda xambaarsan ee uu had iyo jeer dadka kale u jeediyo.
“Madaxweynooow geed quraanyo leh lama jafo, geed quraanyo lama jafo….ha jafin, dadka guuxiisa la soco, faankaan tirada badan dadweynuhu ma arko mana qabo!” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Gaagaab oo wariyaasha kula hadlay Gaalkacyo.
Dhageyso Shirka Jaraaid ee Gaagaab